Kutarisira tsvina: kukosha, maitirwo azvinoitwa uye kudzokorodza | Green Renewables
Munhu ari kuramba achigadzira tsvina kune zvakatipoteredza. The kudyirwa kwemarara zvakakosha kukwanisa kuderedza kukanganisa kwavo kwezvakatipoteredza. Icho chiri pamusoro pezvirongwa zvezviitwa zvakakosha kuti zvikwanise kuita kurapa kwakarurama kwemarara, kubva pachizvarwa chayo kusvika pakubviswa kwayo kana kushandiswa zvakare.
Nokudaro, tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze zvose zvaunoda kuziva pamusoro pekugadzirisa marara, maitiro ayo uye kuti zvakakosha sei.
1 Zvinangwa zvekugadzirisa tsvina
2 Zvikamu zvekugadzirisa tsvina
3 Nzira yekubata nayo tsvina ine ngozi
4 Kukosha kwekudzokorodza kumba
Zvinangwa zvekugadzirisa tsvina
Izvi zvinosanganisira kuunganidzwa kwemarara, kutakura, kubata kwezvinhu zvakakosha zvine njodzi, kudzokororwa kwezvinhu zvinogona kushandiswa. Kupfuuridza nguva, kudzora marara kwave kwakakosha zvakanyanya kune ecology uye hupfumi zvikonzero. Kubva kare-kare, apo kutambisa marara kwakavakirwa pakuiendesa kunzvimbo yakahwanda uye kushandisa kupisa senzira yekuparadza, takapfuura nenzira yekudzokorodza.
Pamusoro pezvo, yakawedzera kuziva kwevanhu nezvekugadzirwa kwemarara, izvo zvinokanganisa kugadzirwa kwechigadzirwa uye kushandiswa kuderedza marara. Nekune rimwe divi, mitemo ine chinangwa chekudzikisa kugadzirwa kwemarara, kubhadharisa mabhegi epurasitiki kana kuronga kurambidza kushandiswa kwemapurasitiki muEU muna 2021, vakanyatsochinja kutambisa marara.
Nokudaro, zvinangwa zvemazuva ano zvekugadzirisa tsvina ndezvi:
Deredza kuvaka kwako zvakanyanya sezvinobvira.
Kurisa kushandiswazve kwezvinhu mumarara aya kuburikidza nekudzokorora.
Kuziva uye dzidzo pamusoro pekugadzirisa marara.
Wedzera mwero weiyo yakasanganiswa marara manejimendi kuti iwanikwe pose pose.
Shandisa nzira dzekurapa uye dzekurasa dzinogona kudzorera simba uye kugadzira mafuta. Mienzaniso miviri yekuzadzisa zvinangwa izvi iSweden neNorway, idzo dzave vatengesi vemarara kuti vaunze simba.
Kurisa kushandiswazve kwemarara mukuita manyowa nekuita fetiraiza.
Kurudzirai matekinoroji matsva ekurasa anoenderana nenharaunda uye asingakuvadzi pane nzira dzechinyakare dzakadai sekupisa.
Pakati pezvinangwa izvi, chinonyanya kukosha ndechekudzivirira chizvarwa chemarara uye kuderedza pazvinoitika. Tevere, isu tichawana izvo zvinhu zvinoshandiswa zvakare uye kudzokororwa kusvika pamwero mukuru kuchengetedza zvinhu, kugadzira simba uye manyowa. Chekupedzisira, marara asina kudzokororwa acharaswa nenzira inokuvadza zvakanyanya. Sezvataona, izvi zvinangwa zvine chekuita nepfungwa yakakosha yehupfumi hwedenderedzwa nhasi.
Zvikamu zvekugadzirisa tsvina
Kutarisira tsvina kunopinda nemuzvikamu zvakasiyana:
Unganidza padanho rechizvarwa, semusha wedu.
Kutakura kuenda kunzvimbo yakakodzera yechikamu chinotevera chekugadzirisa.
Gadzirisa zvakanyanya sezvinobvira mufekitari yakagadzirira kushandiswa zvakare.
Kurasa kwekupedzisira kwetsvina isingagoni kushandiswazve neimwe nzira.
Nechinyakare, kune nzira mbiri huru dzekurasa tsvina, uye nzira mbiri idzi hadzibatsire mukushandiswazve kwezvinhu kana kugadzirwa kwesimba. ndezve:
Kuraswa Muchidimbu, marara anochengeterwa kure nenzvimbo dzinogara vanhu. Ngozi yekusvibisa ivhu, aquifers, kana marara ane ngozi asina kugadziriswa anogona kuve nemhedzisiro yakakura.
Kupisa marara: Nzira yekare yekurasa marara, kubudisa kwayo kusvibisa kunobudiswa mumhepo.
Parizvino, nzira itsva dzekurasa marara dzakagadzirwa:
Pyrolysis: Inopisirwa mutangi rakavharwa rinenge risina oxygen. Izvi zvinoburitsa kusvibiswa kushoma uye kupisa kwakanyanya kunoshanda maererano nekugadzira simba rinoshandiswa. Kana iri imwe organic kana marara yemuriwo, inogona kushandiswa kuwana mafuta.
Biological reprocessing: organic matter, kusanganisira bepa, inogona kuumbwa uye kushandiswa secompost yekurima.
Kudzokorora: shandisa zvinhu zvinowanika zviri nyore (zvakadai sealuminium, plastiki, kana bepa) kugadzira aruminiyamu itsva, plastiki, kana bepa.
Sludge kubviswa kwemvura yetsvina kurapwa: Nekuda kwekukurumidza kukura kweguta, huwandu hwetsvina hwawedzera zvakanyanya. Kuburikidza nekurapa kwayo, marudzi akasiyana-siyana emarara anogona kuwanikwa, ayo anogona kushandiswa sefetireza yekurima.
Idzi ndidzo dzimwe dzenzira itsva dzekupedzisira dzekurasa marara. Kuwedzera kufambira mberi kuri kuitwa mukutsvaga nzira nyowani dzekushandisazve tsvina kusvika pakakwirira, kunyangwe pachine nzira refu yekuenda.
Nzira yekubata nayo tsvina ine ngozi
Aya ndiwo anonzi akanyanya kukuvadza pasi rose:
Inoputika kana kupisa.
Iyo ine muchetura kuvanhu kana ecosystems uye ine biohazard yakanyanya.
Muzviitiko izvi, tsvina ichachengetwa, yakanyorwa, yoendeswa kunzvimbo yakakodzera uye inogadziriswa. Edza kushandisa zvakare zvakanyanya sezvaunokwanisa, kana kuronga nenzira inokonzeresa kukuvara kushoma.
Mumatanho ese aya, nyanzvi uye mainjiniya vanochengeta maitiro aya, vachiedza kubvisa kutyisidzira zvakanyanya sezvinobvira, kudzoreredza izvo zvinogona kudzoserwa uye kuzvitakura nekungwarira.
Sezvataona, marara manejimendi achinja zvakanyanya nguva pfupi yadarika. Chimwe chezvikamu zvakakosha ndezvedu. Kusimudza ruzivo pamusoro pekuderedza kugadzirwa kwemarara uye kudzokorodza zvakanyanya sezvinobvira ndiyo kiyi yekubudirira kwekutonga kwemarara inochengetedza nharaunda.
Kudzokorodza inzira ine chinangwa chekushandura marara kuita zvigadzirwa zvitsva kana zvinhu zvekushandisa kunotevera. Nekushandisa zvizere nzira iyi, tinogona kudzivisa kutambisa zvinhu zvinogona kubatsira, tinogona kuderedza kushandiswa kwezvinhu zvitsva uye, zvechokwadi, kushandiswa kwesimba idzva. Pamusoro pezvo, takaderedza kusvibiswa kwemhepo nemvura (kuburikidza nekupisa uye marara, zvichiteerana) uye nekuderedza kuburitswa kwegasi regreenhouse.
Kudzoreredza kwakakosha nekuti kune zvakawanda zvinogadziriswazve zvinhu zvakaita semagetsi zvigadzirwa, huni, machira uye machira, simbi dzesimbi uye dzisina-feri, uye zvinhu zvinozivikanwa kwazvo senge bepa nemakadhibhokisi, girazi, uye mamwe mapurasitiki.
Kune vatsva uye vane ruzivo rwakanyanya, asi avo vachiri nemimwe mibvunzo, kazhinji kune akati wandei mishandirapamwe kana zvirongwa zvedzidzo yezvakatipoteredza pamarara uye kudzokorora (gore rega rega) kusimudzira ruzivo uye kudzidzisa vanhu nezve kukanganisa kwezvakatipoteredza. Kuberekwa kwemarara uye matanho ekuchengetedza kwezvakatipoteredza kuderedza marara.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve kutambisa marara uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Waste management